I-Apple isungula ... ifowuni. Ngaba omnye umntu uzamla? | Martech Zone
NgoLwesibini, Januwari 9, 2007 NgoMgqibelo, Oktobha 20, 2018 Douglas Karr
Nina niyakwazi okanye anazi ukuba ndisandula ukudlulela kwiMacBook Pro emsebenzini. Ndonwabile ngayo, iyathandeka. I-OSX intle… kodwa ndisenezicelo ezingqubanayo kwaye bendiseneengxaki ngazo. Andiyithandi kangako ukuba indlu yam yiyo yonke iMac. Ndine-G4 enye kwaye ezinye iikhompyuter zam zii-PC eziqhuba i-XP, kunye neBuffalo Linkstation eqhuba iLinux.
Ngaba ndim kuphela umntu emhlabeni ongathandwayo ngu-Apple ukuba wakha ifowuni? Yifowuni bantu! Amagama afana 'nohlaziyo' ayasetyenziswa. Uhlaziyo? Ngokwenene? Ndilahleka ntoni? Ngaba ayisiyiyo nje iFowuni 2.0?
Masihle kuluhlu lweempawu kwaye undixelele apho ndiphazama khona:
Endaweni yekhiphedi esemgangathweni, i-iPhone isebenzisa itekhnoloji ye-Apple enelungelo elilodwa lomenzi elibizwa ngokuba yi "multi-touch". Ayisebenzisi ipenisi, ineempawu zomnwe zeminwe emininzi kunye namabango okungahoyi okungacetywanga. Imisebenzi iyithelekise nezinye i-Apple UIs ezimbini eziguqukayo- imouse kwiMacintosh kunye nevili lokucofa kwi-iPod.
Kulungile, baphucule iphedi yokuchukumisa.
Isikrini sokuchukumisa esingu-3.5 intshi ngekhibhodi ebonakalayo.
Wow, isikrini esikhulu. Sele ndinayo 'ikhibhodi ebonakalayo' kwifowuni yam.
I-iPhone iqhuba i-OS X, inkqubo yokusebenza ka-Apple esemgangathweni; Ngokwengxelo entle ka-Engadget: "Masenze usetyenziso lweklasi yedesktop kunye nothungelwano, hayi izinto eziqhwalelayo ozifumana kwiifowuni ezininzi, ezi zizicelo zangempela ze desktop."
Ndingabaleka i-Illustrator kwiscreen se-3.5? Ewe! Ngaba iza ne-2Gb ye-RAM?
Ivumelanisa ne-iTunes: Abafowunelwa, iikhalenda, iifoto, amanqaku, amanqaku encwadi, iiakhawunti ze-imeyile… ”
Yup, ndiyifumene nefowuni yam ngoku, nayo.
Uyilo lwe-chops luka-Apple lukuyo yonke i-iPhone: “Iscreen se-intshi ezi-3.5, esona sisombululo sesona sikhe sathumela, i-160ppi. Inye kuphela iqhosha, iqhosha "lasekhaya" […] lincinci kunayo nayiphi na i-smartphone… "
Ngcono… ngokukhawuleza… yomelele… yifowuni ezigidi zezigidi ezi- $ 6.
Ikhamera ye-2 megapixel eyakhelwe ngaphakathi
Yup, ndiyifumene. Kwaye ifowuni yam inevidiyo nevidiyo, nayo.
Iimpawu ezibalaseleyo zemidiya - skrolela kumculo wakho, ividiyo ebanzi, ubugcisa bealbham, isithethi esakhelwe-ngaphakathi…
Unayo enye nayo. 3.5 ″ ngaba siscreen esibanzi? Ngubani na, intakumba?
Ungqamanisa i-iPhone yakho nePC yakho okanye iMac (kubafowunelwa njl.njl)
Iimpawu zefowuni esemgangathweni- iSMS, ikhalenda, iifoto, njl. Kunye neefoto kukho isivamvo sokujikeleza esitshintsha iifoto xa uvula ifowuni.
Iscreen sam sijikeleza xa ndityibilikisa ikhibhodi. Kulungile… undifumene… izinzwa zentshukumo zimnandi.
Iswiti. Ilizwi ukuya kwisicatshulwa yinto ebendiyifuna xa ndijonga i-voicemail yam kuhola wendlela! Ndiyakwazi ukuskrola ngeminwe emibini njengoko ndibaleka ndingena kugreyila!
I-imeyile etyebileyo ye-HTML-isebenza ngayo nayiphi na inkonzo ye-imeyile ye-IMAP okanye ye-POP3. Oku kupela ingxaki ngeBlackberry!
Eyam iyayenza lonto.
Isikhangeli seSafari sisebenza kwi-iPhone- “sisikhangeli sokuqala esinokusetyenziswa ngokupheleleyo kwiselfowuni.” Imisebenzi ibonisa ukuba i-NYT isebenza kwi-iPhone-eyona webhusayithi, ingeyiyo inguqulelo yeWAP.
AmaShenannigans! Ndiqhuba iOpera Mobile kwaye 'iyasetyenziswa ngokupheleleyo'.
Ngebrawuza kunye nonxibelelwano lwe-intanethi… ewe, ndiyayenza nam ngokunjalo. Ewe i-intshi eyongezelelweyo yescreen iya kundinceda ndifumane indlela elula.
Amawijethi aqhagamshela kwi-Intanethi ngaphandle komthungo (nge-WiFi kunye ne-EDGE)
Ke ndingayijonga imozulu njengoko ndisiya emsebenzini! Owu ... linda umzuzwana…
I-imeyile yasimahla ye- "Push" IMAP evela kuYahoo
Ndiyazi ukuba ndiyabethabethana ngale nto, kodwa andiyifumani. Kuvakala ngathi Okuninzi Yokuphucula ifowuni, andibi kunjalo
Phosa ividiyo ebanzi ebanzi kunxibelelwano lwevidiyo kuloo nkwenkwe imbi kwaye le Star Trek geek iya kubetha isilingi. Ngaphandle kwayo, nangona kunjalo, oku nje… ndiyakutsho ndithi… ifowuni.
Yintoni elandelayo, iApple isungula iTV? Um….
PS: Uxolo olukhethekileyo kuBill… ebesechengeni ngokuhlahlela amathe kwisidlo sasemini namhlanje kwaye sele ebala ukuba mingaphi iminyaka yomhlala-phantsi ekufuneka ayincamile ukuze ayithenge. Andifuni ukukuthuka uBill, kodwa le yenye yeentengiso ezilungileyo zefowuni.
tags: apilei-apile i-apileiphone
Jan 10, 2007 kwi-12: 40 AM
Ndisalinde uguquko .. kunye I-Applesauce 🙂 🙂
Jan 10, 2007 kwi-3: 01 AM
Kutshanje ndichithe i-400 yeedola kwividiyo ye-iPod nakwizincedisi andizukujonga ukuthenga i-iPhone. Abanye abantu banokuyithanda i-iPhone, kodwa ndikhetha izixhobo ezahlukileyo zefowuni kunye nesidlali seMP3 kunesixhobo esinokuba yi "jack yabo bonke abathengisi abangabakho".
Jan 10, 2007 kwi-6: 38 AM
Ndicinga ukuba into eyenza ukuba i-iPhone ibonakale iya kuba lula. Ngoku andinguye-umntu onebhongo ngefowuni ekucingelwa ukuba yenza konke. Kodwa kuya kufuneka ucofe amaqhosha amaninzi (kwaye kukho ezininzi kubo), ukuba iyandibeka nje. Ingozi ngalo lonke ixesha. Akukho lungelelwaniso lulula (hee, ukusukela namhlanje andinakho nokuyivumelanisa neOSX). Buggy.
Ke, ewe, inqaku ngalinye linokungabi lilo lodwa, kodwa inyani yokuba zidityaniswe yiApple indenza ndibe nethemba lokuba kunokubakho ifowuni ye-PDA enokusetyenziswa.
Ukulula lilizwi kum.
Ndiyamangaliswa kukufumana ingozi kwi-OSX. Ndibaleka imisebenzi yevidiyo efuna kakhulu kwii-macs zam, kwaye ndifumana ingozi engaqhelekanga. Mhlawumbi enye ngeveki-kwaye kwangoko andifuni ukuqala kwakhona. Ngaba usebenzisa ii-plug-ins zomntu wesithathu?
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Ndingumnini owonwabileyo malunga nee-5 iiMac
Jan 10, 2007 kwi-8: 32 AM
Andifuni mntu ucinga ukuba andonwabanga ngumthengi we-Apple… ngandlela zonke, ndiyayithanda iMacBook Pro yam. Okulusizi kukuba, ayisoloko ishiya icala lam! Inqaku lakho 'ngokulula' yiyo yonke into endikhe ndayifumana ukuza kuthi ga ngoku. Ndothuke nyani kulo lonke uhanahaniso emnxebeni!
Bekufanele ukuba ndicacisile… andizange ndiphazamise i-OSX, kodwa ezinye zeenkqubo ezisebenzayo.
Iphepha elichazayo ukuba awundilandeli: Ndiza kuba nee-Macs ezi-5 ukuba bendinokuzifikelela. 😉
Jan 10, 2007 kwi-8: 49 AM
Ithethwe njengeyinyani iMac N00b. Hlala apho Doug…. uyakuyifumana.
Ngaba awunguye umntu onokuhlala undixelela xa uthenga into…. “Ewe…. kodwa ipholile. ”
Jan 10, 2007 kwi-9: 17 AM
Ewe-thina baseApplefans bahlala bezikhusela 😉
I-Apple zilungile kakhulu kwi-hype yazo. Xa ndibukele intetho ephambili, ndihlala ndilingeka ukuba ndityhale iqhosha elithi "Thenga ngoku". 'Ngethamsanqa' nangona kunjalo, iimveliso ziza kamva eYurophu (kwaye nasemva eNorway) kune-US, ke ndihlala ndikwazi ukufunda amava okwenyani kubasebenzisi "abaqhelekileyo".
"Uhlaziyo" kwiAppleTalk kuthetha ukuba "Iyasebenza". Okulusizi kukuba, ayingowomgangatho womzi mveliso…
Jan 10, 2007 ngo-7: 44 PM
Mna kwakhona, ndiyathemba ukuba andijiki ibhlog stalker 😉
Ndabona nje intetho ephambili ye-iPhone, kwaye kubonakala ngathi ifowuni iya kwenza ukukhangela kwiwebhu kungenzeki kuphela (njengoko uninzi lweefowuni zisenza njalo), kodwa zilungile. Kuyafana nakwezona mpawu.
Into endibethileyo emva koko kukuba, hey, le nto iqhuba i-OSX kwaye iya kuba namandla e-Desktop- kodwa kwakungekho nanye iapp yokubonisa ukuba ngexesha lokubonisa. Ngamanye amagama: iinyanga ukuya kuthumelo aziyi kuphulukana nehypes entsha - I-Apple ilungile koku.
Ndiyakhumbula xa i-iPod yafika kuqala, iigeeks ezininzi zazigxeka malunga nayo. Ndikhumbula enye isithi "kulungile, yi-harddisk ephathekayo, ke ngoku?". Kwaye namhlanje zezabo iimarike.
Kwimarike yefowuni kukungena kade, kodwa bomelele ekusebenziseni ityala, kwaye baya kuba nenethiwekhi elungileyo kakhulu yokuhambisa eMelika. Ke, i-1% yentengiso kwi-2008 akufuneki ukuba ingafikeleleki.
Amaxesha amnandi 🙂
Nantsi ikhonkco elinomdla kwinto enokuthethwa kukushicilela ngokubanzi nangokongezwa nokubhloga: http://www.buzzwordcompliant.net/index.php/2007/01/10/two-approaches-to-mobile-publishing/
Kwaye usenokuba uyiqaphele loo nto Yvonne ubuyile phakathi kwabaphilayo.
Jan 11, 2007 kwi-10: 46 AM
Abalandeli beApple kufuneka baphume ngaphezulu
Sep 2, 2008 kwi-8: 08 AM
… Xa ujonga emva, ungayihlaziya le posi?
Kubonakala ngathi i-iPhone ibinempembelelo ethile, kwaye ngokuqinisekileyo itshintshe indlela endisebenzisa ngayo i-intanethi.
Ezinye iifowuni endandinazo ngaphambili babekwazi ukwenza le misebenzi, kodwa zazinzima, zinzima kwaye zicotha.
Sep 2, 2008 kwi-8: 49 AM
Andiqinisekanga, Foo. Isabelo sentengiso kunye nokuthandwa ayothusi inikwe i-Apple. Ukusebenza linyathelo elinyukayo, umboniso onempendulo yokubamba engcono, isisombululo esingcono… kunye nevenkile yeapp (ayisiyoyokuqala). Ndicinga ukuba bayinyusile ibhar ngokuqinisekileyo - kodwa andikaboni okungaphaya 'kokupholileyo'.
Kwicala elibi, i-iPhone isafumana amanqaku amabi ekusebenziseni ubuchule (kuya kufuneka uyijonge ukuze uyisebenzise, ​​ihlala inezandla ezimbini) kwaye bekukho ii-hiccups ezininzi- kubandakanya ukutshintshela ukubulala, ukukhubazeka kokukhubazeka (kusetyenziswa njenge-Intanethi conn yelaptop yakho), umgangatho ophunguliweyo phantsi kwe-3g, nangaphezulu.
Ukuhla ngombhobho yeyona nto inomdla- i-iPhone eya entlokweni kunye nezixhobo zemidlalo eziphathwayo. Oko kunokuba kukutshintsha kweemarike!
I-Android yi-Mobile OS enamehlo am kuyo. Umnxeba ovulekileyo onokusebenza nakweyiphi na i-hardware ngaphandle kwemida kunye nevenkile evulekileyo yesicelo inokuba kukutsiba okukhulu ngaphaya kwe-iPhone.